Circuit Ocean Gwa ị Mgbe / mere (bụghị) iji Tantalum capacitors. Uru, cons, uzo ozo - Tantalum Capacitor nkesa Kemet AVX
Mgbe / mere (bụghị) iji Tantalum capacitors. Uru, cons, uzo ozo
A izu ole na ole gara aga, m na-arụ ọrụ site na Altium SMPS imewe N'ezie si FEDEVEL mmuta nakwa na obere oru ngo hapụrụ m na ihe ha na-edozilighị ajụjụ. N'ụzọ ụfọdụ, m nwetara echiche na n'oge gara aga afọ ole na ole na tantalum capacitors na-a ga-ezere, mgbe n'ezie na ebe ọ maara na ihe mere. Ma na-agbalị ịchọta a 330uF, 6.3V capacitor na ~ 4mOhm ESR na ị ga-ahụ na tantalum bụ ihu ọma nanị nhọrọ. N'ihi ya, m chọrọ ịmalite a ụka banyere tantalum okpu na isi ajụjụ ịbụ:
- Mgbe na ihe mere iji tantalum capacitors?
- Gịnị mere izere iji tantalum capacitors?
- Alternatives ka tantalum capacitors na uru na ọghọm.
M mere ụfọdụ ngwa ngwa research ugbua na ebe a bụ nchịkọta nke ihe m na hụrụ otú anya
Gịnị mere na mgbe iji tantalum capacitors?
Tantalum na-eji ike obere sized capacitors na 'nnukwu' capacitance. Tụnyere ihe ndị ọzọ na-oxide oyi akwa pụrụ ịbụ nnọọ mkpa. Ya mere, n'ihi ngwa niile ebe PCB ohere na-ejedebeghị (eg mobile phones) ha bụ na-aga ụdị capacitor mgbe seramiiki anaghị bee ya ọzọ.
Ọzọkwa tantalum capacitors nwere ike kere na nnọọ obere ESR. Nke a bụ ya mere ha na-eji a otutu (obodo) Switched ike onunu ka nnukwu capacitor. Ceramics nwere ọbụna ala ESR, ma na ike ọkọnọ regulators nke nwere ike ịbụ kwa ala maka loop kwụsie ike.
Mere izere iji tantalum capacitors?
Site na ihe m nwere ike ịhụ ndị a bụ isi ihe mere iji zere tantalum capacitors gị imewe:
Tantalum capacitors ndị dịtụ oké ọnụ ọbụna mgbe ọkọnọ na ina na-ezi. Ọ bụghị kwa ogologo oge gara aga ahịa wee igwe elu ruru ka a uko ke ngwaọrụ.
E nwere ọtụtụ akụkọ nke tantalum capacitors spontaneously combusting. M na-agụ n'ime nke a n'ihu, ma m na-na ya, ụfọdụ forum òtù nwere ike na-esi ọtụtụ na nke a.
Ebe ọ bụ na ndị bụ isi na tantalum ore (columbite-tantalite / coltan) mines na-dị na esemokwu zones (eg Democratic Republic of Congo) ya mere onye pụrụ ịrụ ụka na tantalum bụ a esemokwu ịnweta. M na na na na ọ bụ ezie na ihe ruo n'ókè nke na ka mkpa taa dị ka e nwere isi mines n'ebe ndị ọzọ na ụwa kwa.
Tantalum bụ a arọ metal na dị ka ndị dị otú ahụ na-egbu egbu na-adịghị n'ezie ọma maka gburugburu ebe obibi. M mere chọta a akwụkwọ site AVX na-atụle 'green' tantalum technology ezie na.
Alternatives ka tantalum capacitors na uru na ọghọm?
E wezụga ịbụ kwuru m na-enwebeghị ike ịchọta ihe ọmụma bara uru ma, iche site na e nwere ihe ọzọ Niobium ore dị nke kwesịrị ime ka Niobium okpu dị ọnụ ala karịa. N'aka nke ọzọ Coltan na-eji Ngwuputa Niobium otú eleghị anya esemokwu esemokwu pụrụ itinye n'ọrụ ebe kwa?
(Wet) Aluminium Electrolytic okpu (Elco)
Specific ala-ESR Elcos nwere ike ji mee. Ibu ụkpụrụ, ibu ripple ugbu a fim, ibu voltaji ratings ụfọdụ uru. M ga-ekweta ezie na m ghọtara na m na-ahụbeghị SMT Elcos a ọtụtụ n'èzí n'ji gia. Ndi M uche ihe?
Polymer (Solid) Aluminium okpu
Eji dị ka i ihe ah u ma ọ bụ mmepụta uzo okpu na SMPSs. Ibu ụkpụrụ nanị dị na obere voltaji ratings. Amaghị m site ole a ga-derated ezie na. Ime akụ na ọ bụrụ na ị maara ihe banyere ụdị ndu.
Monolytic Efere okpu
Ibu voltaji ratings, nta derating, na elu ripple ugbu ratings bụ n'etiti uru ya tụnyere tantalum ndu. Ebe ọ bụ na ESR bụ ukwuu ala a obere mpụga eguzogide pụrụ ịdị mkpa maka loop kwụsie ike SMPS aghụghọ.
Ebe a bụ ụfọdụ n'ime Ama m hụrụ. E nwere ọtụtụ na-hụrụ, na ị ga-amasị nwere ifucha na-Ama na ị chọrọ kwa. M gụnyere afọ nke ebipụta mgbe dị, ebe ọ bụ na a afọ ole na ole na anyị ụlọ ọrụ pụtara nza nke mgbanwe.
My chere banyere ya bụ na a ka nwere a siri ike ihere si 1980 si - 1990 si ebe-adịghị agwụ agwụ ibe n'ibe nke ule gia kwekọrọ a tantalum shorting si a ọkọnọ okporo ígwè ma ọ bụ njọ, na nke ikpeazụ bit nke ule gia i rụziri enwe n'elu 30 shorted tantalum si, ebe ha na-eji ha maka decoupling ebe ụfọdụ ụkpụrụ ebe ala zuru ezu na seramiiki gaara eji. (Bụ a ugbu a ejedebeghị mgba ọkụ-mode ga na-enye a na-adịghị mma na-eduga ihu ma ọ bụrụ na ọ na-akwọ ụgbọala buru oke ibu nke a ibu, nke yiri rụpụtara ịfụ otu mgbe ndị ọzọ.)
na ikpe, ọ fọrọ nke nta ha niile ebe dochie ihe electrolytic ke ukem na a seramiiki, (elu ọsọ mgbagha) ma ọ bụ doo seramiiki na ya, na ọ bụ ezie na m na-arahụ na-anwale na-akwụsị akwụsị omume nke osisi, ya ji obi ụtọ na-arụ ọrụ .
Tantalams dị ukwuu. Anyị na-eji ha na anyị na ngwaahịa ihe karịrị 30 afọ na ụbọchị mgbe nwere a ubi odida nke onye na-enweghị oké ihe ọjọọ ma na-eme ka ndị unit. Ee, ya a fọdụrụ ihere site na ụbọchị nke oge ochie. Mgbe ndị mmadụ ga-mberede wụnye ha azụ na ala impedance na sekit na sekit ha ga-ewe ezigbo na a obere ọkụ bọl. Ha n'ezie ime ka oké electric ọkụ. M na-ahụtụbeghị onye-ehi ehi mgbe e na kwesịrị ekwesị. Unu onwe-unu na-eji banyere 6 on ọ bụla otu onye nke anyị mbadamba na-ere si 1500 ka 3000 a afọ nke ha n'ihi na ọtụtụ nke ikpeazụ 30 afọ. A okwu nke na-eri Otú ọ dị anyị ka anyị ghara inwe ojiji nke ha ngwa n'okpuru 35 volts na 10 uF. N'elu na ha àgwà ndị a iwu nke ebelata alaghachi Ko.
Tantalums ndị nwere ihu ọma bombs na-eche ka gaa. Oxidizer + mmanụ ụgbọala. Ị ga mkpa ịchịkwa na ọnụego nke ugbu a na-eru n'ime ha ma ọ bụ ha nwere ike edita. Reverse arịọnụ a na-arịọ maka nsogbu. Ha ga-agbakwa nri site na osisi ma ọ bụ ịgbawa na ihu gị na (ma mere m na ọ bụ m kpatara). E wezụga na akụrụngwa na-hụrụ na a ebe uwa a ga-chebere.
Naa e n'ezie ọ dịghị ihe mere iji tantalum ndu.
All electrolytic capacitors bụ nwere onwe akpụ na onwe ịrụzi dielectric n'ígwé.
Nsogbu na tantalums bụ ma ọ bụrụ na nke ukwuu ugbu a na-ekwe ka igba site a kpatara na dielectric ndị metụtara nanị akụkụ ụfọdụ kpo oku nwere ike ime ka ndị ọzọ mmebi bụghị ịrụzi. The mmebi nwere ike ime ka thermal runaway na ngwa ngwa kpata ajọ ọdịda.
N'ihi na ihe mere na ọ dịghị mma iji tantalums na ala impedance na sekit na sekit nke nwere ike iyi a otutu ugbu a na ndị maara ihe na n'ụzọ underrate ha voltaji ọ bụrụ na ị ga-emerịrị. Ụfọdụ na-emepụta nwere ike ikwu na-agbakwunye usoro resistors amachi ugbu a nke na-eme ha ala ESR kama na-enweghị isi.
Tantalum n'ezie na-eji ebe ị chọrọ ultra ntà, na voltaji fim bụ ihe na-mgbe mgbe ga-gafere, na ebe ị dịghị etinye a reverse voltaji ha, n'agbanyeghị otú nkenke. Ị mkpa amachi ike na-etinye na ha, ma ọ bụrụ na ị derate voltaji ezu ha nwere a dị nnọọ elu ugbu a ike.
M dochie a 1000uF 16V electrolytic na m PC ike ọkọnọ ozugbo na a 10uF 25V mmiri slogu tantalum unit, dị ka ọ dị m mkpa a capacitor na nke a bụ naanị otu onye na n'aka. Na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na afọ e mesịa, ọ bụ ezie na ugbu a na okpu bụ nnukwu. na ripple bụ ala karịa ihe mbụ capacitor nwere. Nke a bụ a LC mmepụta nyo na 5V okporo ígwè, ebe mbụ popped ọ bụ top.